အတွင်းသားလေးတွေ မြင်သာအောင် ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ ခင်သဇင်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……… – Shwe Naung
အတွင်းသားလေးတွေ မြင်သာအောင် ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ ခင်သဇင်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ………
N N | October 24, 2021 | Celebrity | No Comments
လွမ်းနေ တဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက် အလှ ပုံရိပ်လေး တွေကို တင်ပေး လေ့ ရှိနေ တဲ့ ခင်သဇင်က ယနေ့ မှာလည်း သူမ ရဲ့ ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာ ထက် မှာ ဂျင်းဘောင်းဘီ အတိုလေး ကို ဝတ်ဆင် ကာ အပြုံး ချိုချိုလေး တွေနဲ့ ပိုစ့်ပေး ဓါတ်ဖမ်း နေတဲ့ ပုံလေးတွေ ကို တင်ပေးလာတာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။
ပုံလေးတွေ တိုင်းက သဘာဝ ဆန်ပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ လှနေ တာဖြစ် လို့ ချစ် ပရိသတ် တွေ ကြည့်ရှု စေနိုင် ရန်အတွက် ပြန်လည် တင်ဆက် ပေးလိုက်ပါ တယ် နော်။
ပရိသတ် ကြီး ရေ လေယာဉ်မယ် အလုပ် ကနေ ထွက်ပြီး အနုပညာ လမ်းကြောင်း ပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်း လာ ခဲ့တဲ့ သူလေး ကတော့ သရုပ် ဆောင် မင်းသမီးချော ခင်သဇင် ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
သူမ က ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား ကြီးတွေ မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် နေပြီး ပီပြင် တဲ့ သရုပ်ဆောင် မှု တွေနဲ့ ပြောင်မြောက် လှတဲ့ အနုပညာ အရည် အချင်း တွေကြောင့် ပရိသတ် အားပေး လက်ခံ မှုကို ထိုက်တန် စွာ ရရှိထားတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ်။
ခင်သဇင် က အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု အပြင် ပရဟိတ တွေမှာလည်း စိတ်အားထ က်သန် စွာ ကူညီ လုပ်ကိုင် ပေးတက်တဲ့သူ ပါ။
အဲလို ကူညီသူ လေးဖြစ် လို့ ပရိသတ်တွေ က ချစ်စနိုးနဲ့ ပရဟိတ မင်းသမီးလေး လို့ ချီးကျူး ပြောဆို နေကြ တာပါ နော်။
သူမ က ယခုလက် ရှိမှာ တော့ Photo shooting တွေ နဲ့ ကြော်ငြာ တွေကို ပါဝင် ရိုက်ကူး နေပြီး MRTV -4 မှာ ပြသနေ တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ လေး ထဲ မှာလည်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင် နေတာ ကို တွေ့ရပါ တယ်။
အမိုက်စား ဖက်ရှင်နှင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လှနေတဲ့ ပိုးကြာဖြူခင်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ…..
နိုင်ငံခြားသူလေးလို လှပပီး ချစ်စရာ ကောင်းနေတဲ့ ၀င်းရွှေရည်သင်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်‌လေးများ……..
ခေးဆက်သွင်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ….
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ လုလုအောင်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ………..
ရင်ဖိုစရာ ကောက်ကြောင်းအလှတရားတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြင်း ညို့ယူဖမ်းစား ထားတဲ့ ‌ချောကလျာရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……….
ကိတ်လွန်းလှတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို ပရိသတ်တွေ မြင်သာအောင် ချပြလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……….
ဖွေးဥနုထွက်နေတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ အထာကျကျ လှပနေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……….
သူမရဲ့ အမိုက်စား ကိုယ်လုံးလေးကို ဆက်ဆီကျကျ လှုပ်ကာ ကပြထားတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယို‌လေး………
ထပ်ခါခါ ပြန်ကြည်ချင်လောက်အောင် ညို့ဓာတ်ပြင်းတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ အထာကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ BELLA ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ…….